Izidakamizwa "Fitolaks": yokusetshenziswa
Izidakamizwa "Fitolaks" libhekisela laxatives. Kuyinto ibhekwa wezokudla esekela umsebenzi emathunjini. Lokhu amaphilisi round kuhloswe resorption, okuyinto esivela ukunambitheka elinuka kanye nephunga elimnandi. Izibhebhe tihlelwe e amabhamuza zezinhlamvu amabili namashumi amane. Futhi imithi "Fitolaks" khona ngesimo akhiphe okusamanzi okungaphathwa itholakala izitsha eziyisikhombisa kokuba ivolumu eziyikhulu namamililitha.
Isenzo ezilethwa imithi "Fitolaks" imfundo manual uchaza ngale ndlela. Anakho eziningi izakhiwo ewusizo, uba i anti-inflammatory, laxative futhi antispasmodic, ngaphezu, uyakwazi ukwandisa uketshezi of nezindlala wokugaya ukudla. Izidakamizwa iqala ukwenza ngemva eziyisishiyagalombili - nqo kusukela esikhathini reception yayo.
Izindlela Yokusebenzisa "Fitolaks" ukulungiselela incwadi yeziyalezo uchaza kanje. Thatha lezi amaphilisi ngesikhathi sakusihlwa (mhlawumbe ebusuku). Isikali Adult inikezwe omunye - izibhebhe ezimbili ngosuku emavikini ambalwa. Uma kudingekile, inani amaphilisi eyanele ngamunye zingandiswa lungene izingcezu ezine.
I yokusetshenziswa exhunywe izidakamizwa "Fitolaks" Izimo ahlelwe ngendlela elandelayo: hypersensitivity ngabanye ukuba kwenye yezingxenye we nomuthi, isiguli nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokukhulelwa, kodwa futhi inkathi lapho kwenziwe ibele ingane.
Izidakamizwa "Fitolaks" (laxative) livela yemifino, ngakho umphumela uyazonga kakhulu, ngaphezu kwalokho, ngesikhathi lapho kukhululwa izidakamizwa awurekhodiwe ngokusemthethweni akukho amacala ukusabela ezingezinhle. Isitoreji lokhu ukulungiselela wenziwa endaweni eyomile, bavikeleke kwelanga, ukuzamukela izingane emazingeni okushisa okuvamile. Isikhathi sokuphila kwayo eshalofini kumele singeqi iminyaka emibili.
Ukwakheka izidakamizwa ukulungiselela "Fitolaks" imfundo manual unika okulandelayo: amabhilikosi omisiwe, yefilakisi imbewu, amahlamvu Senna, akhiphe Senna, amahlamvu ukhova makhulu, thallus kelp, Imicu yotshani yemifino, imbewu fennel kanye noshukela.
Umthelela ngayinye izithako herbal ezakha izidakamizwa "Fitolaks" imfundo manual uchaza icala. I amabhilikosi iqukethe eziyinkimbinkimbi izakhi trace, amavithamini, Imicu yotshani wezokudla (cellulose). Lesi sici has kuphela umphumela hhayi laxative ku emathunjini, kodwa futhi umphumela ngokubhukula kuyo yonke emzimbeni womuntu. Ngaphezu kwalokho, amabhilikosi aqukethe eningi potassium, kuvimbela ukushoda yayo kungenzeka ngokuqondene ngokuhoxa okwalandela emathunjini.
Senna, olubizwa nangokuthi Senna, esetshenziselwa impumuzo esimweni atony kapopopo ukuqunjelwa umkhuba. ezisebenzayo ezimweni ezinjalo benza oluqukethwe kulesi antraglikozidy sithombo esingatshalwanga, kanye ipheshana wokugaya ukudla, chaza kuwo futhi kokuba zishukumisa receptor mucosal.
Plantago ezinkulu nobuntu laxative, umphumela antispasmodic futhi eqeda ukuvuvukala.
Fennel uba carminative futhi antispasmodic, futhi ngaphandle kwalokho, uyakwazi ukuthuthukisa uketshezi of nezindlala wokugaya ukudla.
Njengoba ehlanganisa wonke lezi zitshalo ndawonye ngokuhlanganisa amandla abo emvelo, Onjiniyela we izidakamizwa wathola eyanele kahle futhi imvelo, izidakamizwa organic. Ngaphambi isicelo se-nomuthi, nokho kutuswa uthintane onguchwepheshe.
"Amoxiclav" ibele: indlela usebenzisa kanye nokubuyekeza
Imisebenzi uthisha nomphakathi esikoleni eRussia
Amabhuzu Suede nge izithende ongaphakeme: kanjani ukuba ukhethe futhi anakekele?
Isizinda Ukudoba esifundeni Astrakhan: engabizi futhi izinga nokungcebeleka
Geyl Garold (Gale uHarold): Biography, ukuphila siqu, amabhayisikobho akhe
Indlela yokubala ukuthi zingaki ama-khalori etizeni oluhlaza
Indlela yokwenza ibhola ntambo futhi lezo izandla zabo